10 Aug, 2018 - 00:08	 2018-08-09T16:12:36+00:00 2018-08-10T00:03:05+00:00 0 Views
MAKADII? Ndiri mukadzi ari kutsvagawo murume anoda zvemba, ndine makore 30 nevana vatatu uye ndiri pamushonga asi handioneki. Ndodawo ari pamushonga seni, anenge andifarirawo ngaandibate apa 0785 503 807. Ndingafare ndikawanawo wangu.
Makadii zvenyu? Ndiri murume ane makore 48 nevana 2, ndotsvakawo mudzimai wekudanana naye ane makore 48 zvichidzika. Ndinobatika pa0776 345 823.
Ndiri murume ane makore 40 nevana 4 uye ndiri pamushonga. Ndinodawo mudzimai anotya Mwari ane makore 37 zvichidzika. Anoda ngaandibate pa0782 716 740.
Makadii? Ndiri murume ane makore 40 nevana 2, ndotsvagawo mukadzi ari pamushonga seni uye ane nevana vake. Ngaave ane makore 23 zvichikwira. Anoda nezvangu anondibata paWhatsapp inoti 0713 569 778.
Ndiri mukomana ane makore 30 okubereka ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi ane makore 18-22 ave kuda zvemba. Ndinoda asina chirwere nokuti ini handina. Ini ndinoshanda muHarare, ndinobatika pa0785 940 509.
Ndiri murume ane makore 47 nevana 3, ndotsvaga shamwarikadzi ine mazirudo iri HIV negative. Zvakawanda tozotaura pa0718 843 139.
Ndiri murume ane makore 27 nemwana 1, ndogara Gweru uye ndiri kutsvagawo musikana wekuroora. Ada nezvangu ngaandibate pa0773 364 952.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 27 ekuberekwa ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 – 21 asina chirwere seni ane mazirudo. Andifarira ngaandibate pa0771 040 233.
Makadii zvenyu? Ndiri murume ane makore 37 ndotsvakawo mukadzi ari pamushonga. Ndobatika pa0774 925 421.
Makadii? Ndiri murume ane makore 36 ndotsvakawo mudzimai ane makore 30 zvichikwira anoshanda ini ndinoita mabasa emaoko. Andifarira nhare dzangu 0716 442 289.
Makadii? Ini ndinonzi Tapiwa ndine makore 21 uye ndinogara kuMt Darwin. Ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 – 20 ari siriyasi asiri pamapiritsi. Andifarira anondibata pa0715 004 613.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndodawo musikana ane makore 23 zvichidzika anoda zvemba. Nhare yangu 0712 014 234.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 32 ekuberekwa, ndotsvagawo musikana wekuroora ari HIV negative sezvandiri. Ndinobatika pa27 744 485 375.
Makadii? Ndiri murume ane makore 33, ndiri muHarare uye ndinodawo musikana wekuroora anoshanda ane makore 18 kusvika 27 asi kwete mudhafu. 0717 026 993 ndidzo nhamba dzangu.
Ndiri murume ane makore 28 nevana 2 ndotsvakawo mudzimai anoda zvemba, ngaave nemakore 20 kusvika 24 nemwana 1 kana asina. Ndinoda anogara kuMash West, ini ndogara kuChinhoyi. Nhamba dzangu 0715 448 888.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 41, ndinotsvagawo murume ari HIV positive ane makore 45 zvichikwira. Ndine mwana 1, nhare yangu 0775 229 993.
Makadii zvenyu? Ndiri mudzimai ane makore 48 nevana vaviri, HIV positive uye ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 49 kusvika 53 ari muHarare. Vanoda ndibatei pa0776 472 271.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 27 nevana 2. Ndotsvagawo murume anoda zvemba ane rudo. Ngaave ane makore 29 kusvika 38 asina chirwere seni. Andida ngandibate pa0778 798 009.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 26 nemwana 1. Ndinotsvagawo mukadzi kana musikana ane makore 20 kusvika 30 anoshanda uye anotya Mwari. Ngaave ane rudo, andifarira ngaandibate pa0778 525 908.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 32 nemwana mumwe. Ndotsvaga mukadzi ane makore 18 – 28 ari HIV ane mwana mumwe, nhamba dzangu 0785 987 599.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 27 ndodawo mukadzi ane makore 25 zvichidzika. Zvizhinji totaura, andifarira ngaandibate pa0771 704 125.
Ndiri mukomana ane makore 34 ndiri kutsvagawo musikana anoda zvemba kwete mahumbwe. Ndine vana vaviri vandiri kugara navo vasina amai, ndiri HIV negative uye ndoda ari serious ane makore 34 zvichidzika kusvika pa20. Kana pane andidawo ndibate panhamba idzi 0776 491 676. Ndoda mushava, mutsvuku regera.
Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 20, ndinotsvakawo musikana wekudanana naye kusvika muwanano ane makore 18 – 20. Auye asingarware, andida ngaandibate pa0785 187 667.
Makadini? Ndiri mudzimai ane makore 20 nemwana 1, ndiri positive uye ndodawo murume anoroora ane makore 23 kusvika 30 asingaratidze kurwara. Anonamata Chishanu ngaandibate pa0718 477 465.
Makadii? Ndiri kudawo mukadzi wekuita mwana naye ane makore 20 – 35 ari HIV+ achigara muHarare. Andida ndibatei pa0782 476 062.
Makadii veKwayedza? Ndiri kutsvagawo mafriends vakomana nevasikana. Nhamba dzangu 0782 376 536.
Makadii henyu veTishamwaridzane? Ini ndiri musikana ane makore 21, ndotsvagawo murume anoda wanano asiri pamushonga kana ane mwana 1 asi ini handina. Nhare yangu 0775 831 462.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 39, ndinotsvagawo murume wekuchengetana naye anodawo zvandiri. Ndinorarama ndiri positive uye ndine vana 3. Ndatenda, anoda ngaandibate pa0716 865 362.
Ndiri murume ane makore 46, ndinotsvaga mukadzi ane makore 40 zvichidzika. Andifarira anondibata panhare dzinoti 0738 394 500.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 21 ave kuda zvemba. Ngaave ari pachokwadi anoenda kuchechi. Nhare dzangu 0716 065 996.
Makasimba here? Shambadzaiwo tsamba yangu veduwee. Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 25 kusvika 35 anoshanda. Ndinoda ane mwana 1 kana 2 asi vakadzi vevanhu kwete. Andifarira ngaandibate pa0716 156 023.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore 23 ekuberekwa ndinotsvagawo murume ane makore 28 kusvika 30. Nhare yangu 0784 852 112.
Ndiri murume ane makore 26 nevana 2, ndiri kutsvaga mukadzi ane mwana vake ane makore 20 kusvika 23. Nditori pachokwadi kuda kuroora. Anoda ngaandibate pa0777 481 781.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 25 nevana vaviri. Ndiri kutsvagawo murume wekuroorwa naye ari pachokwadi uye anoshanda. Andida ngaandibate pa0783 383 994.
Makadii henyu veKwayedza? Ndingafare chose mukabuditsawo shambadzo yangu. Ndiri musikana anoda mukomana ari pachokwadi nekuroora.
Ndine makore 29 uye ndodawo mukomana ane makore 31 – 34, ndogara muHarare. Ndoda asiri pamushonga, nhamba dzangu 0775 408 563.
Ndiri mukomana ane makore 21 ekuberekwa uye ndinotsvagawo musikana wekuroora. Ngaave mubati wemaoko muupenyu uye asiri pamushonga anondibata pa0771 496 575.
Ndine makore 25 uye ndinodawo mukomana ane makore 29-33 ari HIV positive seni nekuti ndaneta nekunyengedzwa. Ini handina kubvira ndambowanikwa asi varume vevanhu nevakamboroora kwete. Ndinogara kuKadoma, nhare yangu 0783 839 761.
Makadini? Ndiri mudzimai ane makore 20 ndotsvagawo murume ane makore 25 – 30 anoshanda. Handina chirwere, matsotsi nevarume vevanhu kwete. Nhare yangu 0778 341 507.
Ndakambonyorera asi handina kuwana wandaida, ndiri mukadzi ane makore 51. Ndiri HIV positive uye ndinodawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 58. Anenge andifarira anondibata pa0775 908 341.
Ndiri murume ane makore 39 nevana vaviri, ndiri muHarare uye ndotsvaga mukadzi ari pachokwadi ari HIV negative. Ane vakewo ngaandibate pa0715 943 109.